Landelela i-Roller Bearings Ngokusho kokusetshenziswa kwezingxenye - i-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Landelela i-Roller Bearings Ngokusho kokusetshenziswa kwezingxenye
Landelela i-Roller Bearings Ngokusebenzisa izingxenye
Ngokusebenzisa izingxenye nezimo zokusetshenziswa kanye nezimo zezemvelo ukukhetha ubukhulu, ukuchithwa, kanye nezintambo ezifanele zokuhamba kwezingoma ukuqinisekisa ukuthi ukuphila nokuthembela kwesibindi.
Sebenzisa izingxenye: ukulandelela ama-roller bearings emzimbeni we-radial ukuthwala umthwalo ohlangene ohlangene ne-axial, ngokuvamile ngezigcawu ezimbili zokuhamba kwezingoma zokulinganisa okusetshenziselwa ukusetshenziswa, ikakhulukazi emotweni ngaphambi nangemva kwehabhu, i-bevel gear esebenzayo, i-differential, reducer kanye nokunye ukudluliselwa izingxenye.
Isivinini esivumelekile: izikhathi ezingu-0.3-0.5 isivinini esivunyelwe sokuthwala endaweni ehlelwe kahle, egcwele kahle. Ngaphansi kwezimo ezivamile, izikhathi ezingu-0.2 umshini wokulinganisa uwufanele kakhulu.
I-angle yokuthambekela engavumelekile: Amabhethri wokugqekeza ama-crawler ngokuvamile awavumeli ukuthi isixhumi esivumelana nomgodi wezindlu siboshwe, uma sicutshungulwa, ubuningi abudluli 2 '.
Ukushisa okungavumelekile: Ngaphansi kwezimo ezivamile zokulayisha, futhi ukugcoba kunomshini wokushisa okuphezulu futhi kusetshenziswe ngokufanele, ukukhiqiza jikelele kuvunyelwe ukusebenza endaweni yokushisa ephakathi -30 ° C kuya ku-150 ° C.
Ukukhetha ukukhetha amafutha:
Ama-akhawuntingi angalungile angama-36% wesibangela sokuhluleka kusengaphambili kwezingqwembe ze-roller ithrekhi. Inhloso evamile yamafutha ayikwazi ukuhlangabezana nezidingo zezinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene ezikhethekile zokusebenzisa, usebenzisa eyodwa kuphela noma zonke izinhlobo zamafutha ajwayelekile ukuhlangabezana nazo zonke izicelo zokubheja, izinkinga ezibangelwa kakhulu kunezinzuzo zomkhiqizo onobunye. Ukubeka izimo zohlelo lokusebenza kuyahluka kakhulu, ukugcoba okufanelekile kudinga ukugcoba nokufaka izimo zokusebenzisa ukuhambisana.
Ukubeka amafutha yisisekelo sokuqinisekisa ukubheja okubhebhethekayo, ukukhathazeka okungenakukhathazeka nokuthembela okuphezulu, ngisho nasezimo ezibucayi kakhulu zokusebenza. Ukugcoba kuvimbela ukungcola ukungena ekuthwaleni, ukuvimbela umthelela womthelela nokuvimbela ukubola. Ekusetshenzisweni kokukhethwa kwamagesi afanelekile ukuthola ukuphelelwa kokuphila kwezimo eziyisisekelo.
Ukukhethwa okulungile kwezinga lokugcoba kuhlanganisa uhlobo nosayizi we-roller bearing bearing, izinga lokushisa, ijubane, umthwalo kanye nokuphila okudingekayo service kanye nenkathi yokufaka lubrication period.
Isibambiso sokuqala sendawo esithwalayo sancipha kancane kancane ngenkathi kuqhutshwa inqubo, futhi inani lokuxosha libeka izinga lokulingana. Ngakho-ke, imvume yokuqala ye-radial bearing bearing must be measured before installation. Ngesikhathi sokuqhuma kwesibalo, ukugudluza kwe-radial kugcinwa njalo kuze kube yilapho imvume edingekayo yomsakazo iyancipha futhi ukulungeleka kokuphazamiseka okufunayo kufinyelelwe.
Njengoba izinga lokushisa lihambisana nokugcoba, isivinini, umthwalo, umthelela wemvelo, itafula libonisa kuphela ububanzi bokushisa obuseduze. Inendima yokuletha ukugcoba ukugcoba kokukhathala kokuphila nokukhathala, ukugqoka, ukushisa kwezinga lokushisa, ukuguquka kwamanye amazwe kanye nokunye umthelela obalulekile, akukho lubrication evamile, ukubheja akukwazi ukusebenza. Ukuhlaziywa komonakalo wokulimala okubangela ukulimala kubangela ukuba cishe u-40% wokulimala okumele kuhlotshaniswe kuhlobene nokugcoba okungenamsoco. Ngakho-ke, ukugcoba okuhle kwezingxenye zokuhamba kwezingoma ezihamba phambili kuyindlela ephumelelayo yokunciphisa ukubheja nokugqoka. Ngaphezu kwalokho, ukufakelwa kwe-lubrication kukhona ukushisa, ukugqwala, uphawu, ukunciphisa umthelela wezindima ezihlukahlukene.
Izindawo ezingezona ezijwayelekile zezingubo ezihlanzekile
I-miniature Deep Groove Ball Bearings efakwe ukusetshenziswa